टिकटक भिडियोमा अनुहार नदेखाई समाज सेवा गरिरहेकी गिभिना को हुन् ? – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ टिकटक भिडियोमा अनुहार नदेखाई समाज सेवा गरिरहेकी गिभिना को हुन् ?
टिकटक भिडियोमा अनुहार नदेखाई समाज सेवा गरिरहेकी गिभिना को हुन् ?
दीप संञ्चार असोज ४, २०७८ गते २१:४८ मा प्रकाशित
सामाजिक संजाल टिकटकमा अहिलेको समयमा चर्चामा । कोहि राम्रै प्रतिक्रिया पाएर भाइरल छन् भने कोहि नराम्रो। टिकटकबाट भाइरल बनेकी प्रेरणादायी टिक टकर हुन् २४ वर्षीय गिभिना मगर। उनि पोखराकी हुन् पेशाले शिक्षक भएकी उनि टिकटकमा निकै मार्मिक भिडियो राख्ने गर्छिन ।
खाली समयको सदुपयोग गर्दै उनले आफ्नो आसपासका खानाको जरुरि भएका हरुलाई खाना पुर्याउछिन।सडक पेटी मा बसेका हरुको सहायो गर्दा को भिडियो उनले टिकटकमा राखेकी छिन। उनी आफ्नो व्यक्तिगत आय को माध्यम बाट सबै मद्दत प्रदान गर्दछ। उनी ती वृद्ध मानिसहरुको डाटा पनि संकलन गर्दछिन् जसलाई उनी मद्दत गर्छिन् र पछि उनीहरुलाई वृद्धाश्रममा लैजान्छिन्। उनी पहिले नै ५० भन्दा बढि बुढापाकालाई वृद्धाश्रममा लगिसकेकी छिन्।
नकरात्मक भिडियो बनाउने देखि लिएर सकरात्मक भिडियो पनि रहेका छन्। उनको यो महान काम एक उदाहरण बनेको छ। टिकटक मा आउने भिडियोहरुले पनि सकारात्मक संदेश दिएको छ भने गिभिनाको भिडियो राम्रो संदेश दिनको लागि बनाइएको छ। जरूरी मानिसहरुलाई मद्दत गरेर दया फैलाउन सकिन्छ।
हामी साँच्चै उनको दया को कदर गर्दछौं र उनीहरु लाई सबै जरूरी मानिसहरु को लागी अधिक राम्रो कामहरु गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो कामना गर्दछौं।